apple ipad air 4 kuburitsa zuva, mutengo, maficha uye nhau
Kuru Nhau & Ongororo Apple iPad Air 4 kuburitsa zuva, mutengo, maficha uye nhau
Apple iPad Air 4 kuburitsa zuva, mutengo, maficha uye nhau
Iyo iPad Mhepo nhevedzano yaimbove iri Apple & apos; s midrage inopa kune avo vanoda piritsi rine simba ne (2nd-gen) Apple Penzura rutsigiro, asi zvakare munodawo kugamuchira dhizaini yechinyakare uye yakaderera specs pane iyo iPad Pro, nemutengo unonzwisisika. Zvirinani zvaive zvakadaro kusvika iyo iPad Air 3, nekuti ichangoburwa iPad Air 4 yakaunza zvese nyowani, yazvino dhizaini uye toni yehunyanzvi maficha. Hezvino zvese zvaungade kuziva nezve zvakagadzirwazve 2020 iPad Mhepo 4.
Apple iPad Air 4 kuburitsa zuva
Apple iPad Air 4 mutengo
Apple iPad Air 4 dhizaini uye kuratidza
Apple iPad Air 4 yakatarwa
Apple iPad Mhepo 4 software
Iyo 2020 iPad Air 4 yakaitwa kuwanikwa muna Gumiguru 23. Ona yedu iPad Mhepo (2020) ongorora pano .
Tenga iyo nyowani Apple iPad Air 4 (2020) kubva kuApple.com
Iwe unogona zvakare kufarira:
Apple iPad Air 4 vs iPad 8: Ndeupi waunofanira kutenga?
Apple iPad Air 4 vs iPad Mhepo 3: Unofanirwa kukwidziridza?
Apple iPad Pro (2020) ongororo
Samsung Galaxy Tab S7 + ongororo
Apple iPad Mhepo 3 (2019)
Kuongorora kweIOS 14
Mutengo weiyo Apple Apple Air 4 nyowani yakasvetuka ne $ 100 pamusoro peyaakatangira, sezvaitarisirwa, tichifunga kuti runyerekupe rwekugadzirwa kwazvino rwakaguma rwave rwechokwadi. Iyo iPad Air 4 inotanga pa $ 599. Mitengo yemhando dzese dzePad Air 4 (2020) ndeiyi inotevera:
$ 599 yeiyo 64GB yeWi-Fi iPad Mhepo 4 (2020)
$ 749 yeiyo 256GB yeWi-Fi iPad Mhepo 4 (2020)
$ 729 yeiyo 64GB Wi-Fi + Cellular iPad Mhepo 4 (2020)
$ 879 yeiyo 256GB Wi-Fi + Cellular iPad Mhepo 4 (2020)
Makuhwa acho aive echokwadi! Iyo nyowani iPad Air 4 ichaita mutambo wazvino dhizaini uye matsva mavara matsva.
Sezvo vazhinji makuhwa uye kudonha zvainge zvaratidza, iyo nyowani iPad Air 4 (2020) mitambo dhizaini yakagadziridzwa, yakafanana neiyo Pro Pro. Kunyanya kukosha, izvi zvinoreva kuratidzwa kwese-skrini neyakaenzana, yakatsetseka bezels, ichipa iyo iPad Air 4 kutaridzika kwemazuva ano akateedzana anga achidikanwa kwemakore akati wandei.
Iyo yekuratidzira pachayo ikozvino yave 10.9-inch 2360 x 1640 liquid retina imwe, mitambo inopfuura 3.8 mamirioni pixels. Iyo & apos; s zvakare yakanyatsorongedzwa, inosanganisira anti-inoratidzira kupfeka uye inotsigira Chokwadi Tone, senge iyo Pro Pro.
Mutsva sarudzo dzemavara
Kusiyana nebhajeti 2020 iPad, iyo inouya nemitatu chete, iyo 2020 iPad Mhepo inouya mune maviri ekuwedzera mavara, ayo ari Sky Bhuruu uye Girini. Ese mashanu anowanikwa mavara akasiyana eiyo 2020 iPad Mhepo ndeinotevera:
Apple iPad Air 4 (2020) maratidziro
Kunge iPad Pro, iyo iPad Air 4 inotsigira Apple & apos; s Mashiripiti Khibhodi uye yechipiri chizvarwa Apple Penzura.
A14 Bionic chip, 6-musimboti CPU
Dhizaini nyowani ine ese-skrini kuratidza
Bata ID sensor yakabatanidzwa mune yepamusoro Simba bhatani
Mavara matsva - Rose Goridhe, Green uye Sky Blue
10.9-inch 2360 x 1640 liquid retina inoratidzwa neChokwadi Tone
Vatauri veStereo, imwe kudivi rega
60% nekukurumidza LTE
Apple Penzura 2 uye Mashiripiti Keyboard kutsigira
64GB kana 256GB yekuchengetedza
Pamusoro peiyo dhizaini yakagadziridzwa, iyo 2020 Apple iPad Mhepo 4 imhuka chaiyo mukati. Inoratidzira iyo A14 Bionic chip, Apple & apos; inokurumidza kwazvo panguva yeMweya 4 & apos; kuburitswa, ichiita iyo iPad Air 4 & apos; s performance 40% yakakwira pamusoro peMhepo 3. Iyo Air 4 zvakare inokwanisa 30% nekukurumidza kugadzirwa kwemifananidzo . Munguva yekuburitswa kwayo, Apple yakacherechedzawo kuti iyo iPad Air 4 inosanganisira inokurumidza neural injini uye yakanyatso kuvandudza kugona kwemuchina kugona.
Imwe shanduko inozivikanwa ndeimwe yataitarisirawo kubva kumakuhwa - iyo iPad Air 4 mitambo chiteshi che USB Type-C pachinzvimbo cheMheni. Chiteshi ichi chinobvumidza kuwedzerwa kwedhata kusvika kumagigabiti mashanu pasekondi (kakapetwa kagumi kupfuura pane yapfuura Air modhi, iyo yaishandisa Mheni), uye inotsigira makamera, ekunze anotyaira uye ekunze monitors kusvika anosvika 4K resolution.
Apple iPad Mhepo (2020)
500 cd / m2 (husiku)
60Hz zororo mwero, Oleophobic unhani, Ambient mwenje sensor
Hexa-core, 3100 MHz, Dutu remoto uye Icestorm, 64-bit, 5 nm
Apple 4-musimboti GPU
64GB, haina kuwedzerwa
LTE: 9 maawa; Wi-Fi: maawa gumi
Kamera imwe chete
Kukura kwemukoto: F1.8
3840x2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Yakazara HD) (240 fps)
Nguva-yekupera vhidhiyo, Inoenderera autofocus, Mufananidzo-kutora panguva yekurekodha vhidhiyo, EIS
1920x1080 (Yakazara HD) (60 fps)
iyoavharejiiri 16.3 oz (464 g)
$ 729 Ona iyo yakazara Apple iPad Mhepo (2020) specs kuenzanisa kana kuenzanisa ivo nemamwe mafoni vachishandisa yedu Specs Kuenzanisa chishandiso.
Apple iPad Mhepo 4 kamera
Iyo iPad Air 4 inouya ne7-megapixel Facetime pamberi pekamera inokwanisa kuita 1080p HD vhidhiyo yekutora uye Smart HRD. Iyo yekumashure kamera ye2020 iPad Mhepo yakafanana neiyo iri paPad Pro - 12-megapixel sensor inokwanisa 4K 60 mafuremu-pasekondi (FPS) kurekodha. Izvo & apos; zvinonzi zvakare zvinoratidza kuvandudzwa kwevhidhiyo kudzikama.
Apple iPad Air 4 vatauri
Iyo nyowani 2020 iPad Air 4 ine ina mutauri grills, asi zvirokwazvo inotakura maviri chete maspika. Nhau dzakanaka ndedzekuti, ino nguva imwe neimwe iri parutivi rwepiritsi. Nekudaro, vashandisi vanogona kuwana chaiyo stereo mhedzisiro kana vachiona zvirimo mune landscape mode. Pakutanga paMhepo mamodheru vaviri vatauri vaive kurudyi rwehwendefa, uye vachiri mubhajeti 2020 iPad. Mukushandisa kwedu, takawana vatauri zvakawanda zvine ruzha uye zvizere, nehuvepo hwakanaka hwemabhass.
iPadOS 14 inoshandisa mabara epadivi uye ekudhonza-pasi mamenyu eiri nani komputa-senge chiitiko
Iyo iPad Air 4 irikumhanya iPadOS 14 pakuvhurwa, iyo inouya nenhamba dzinoverengeka dzekushandisa dzekuvandudza. Kunyanya kucherechedzwa, chizvarwa chechipiri Apple Penzura iyo iyo 2020 iPad Mhepo inotsigira yakawedzera kunyanya kubatsira neScribble. Scribble ndeye iPadOS 14 ficha iyo inoita kuti vashandisi vanyora mune chero chinyorwa ndima neApple Penzura, pachinzvimbo chekufanirwa kuchinjika pakati payo ne-on-screen (kana panyama) keyboard.
Iyo Safari browser paPadesi yave kukwanisa kududzira mawebhusaiti kumitauro minomwe yakasiyana. Safari yakawedzerawo zvakavanzika maficha, kusanganisira kutarisa mapassword emushandisi asina simba.
Iyo iPad & apos; s Kumba Screen pane iPad OS 14 inoratidzira yakagadziriswazve mawadhi mune Nhasi View, ayo anotora zvirinani piritsi uye apos; s hombe kuratidza nekuratidza rumwe ruzivo kupfuura pakutanga. Widgets inogona kuve yakarongeka zvirinani uchishandisa iyo nyowani Smart Stack sarudzo, iyo inogona kuisira akati wandei akasiyana mawijeti mune imwe nzvimbo uye kunyange kushandisa pane-chishandiso njere kukuratidzira iwe chaiko widget panguva yakakodzera yezuva.
verizon chinyorwa 10 pre order
kusarindira kumirira uye kujekesa kumirira
Ungachinja sei yako Android foni & apos; s default browser kuGoogle Chrome
Apple & apos; yazvino iPhone uye iPad kutengeserana-mune shanduko (kazhinji) akanaka mashoko
LG G6 kurongedza bhatiri rinobviswa
Galaxy S9, S9 + won & apos; t inobhadharisa nekukurumidza kupfuura iyo Galaxy S8 uye S8 +, zvinoita
Nyaya dzine LG G4 yekudzivirira inodzivirira kudzivirira nekukurumidza matepi uye anobata kubva kunyoresa pachiratidziri
Pakati-pasi: Mumvuri weHondo unouya kune zvishandiso zveApple uye iOS munaGunyana 28
Apple Wallet inotsigira maIDs uye masuo ekuvhara neIOS 15
Weird, anosetsa, uye asingabatsiri chinhu madhiri anowanikwa paAmazon Prime Day 2021